Big City Small World (Series 1 Episode2- Job offer) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on February 22, 2012 at 11:07 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series 1 Episode2- Job offer (အတွဲ (၁)၊ အပိုင်း (၂) အလုပ်ကမ်းလှမ်းခြင်း)
Johnny, Olivia နဲ့ Fadi တို့အားလုံးက Harry ကို အလုပ်တွေ ကမ်းလှမ်းကြတယ်။ သူဘာလုပ်သင့်လဲ?
Series 1 Episode2- Job offer ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
ကဲ။ ကိစ္စတွေ အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ သူငယ်ချင်း?
ကောင်းပါတယ်။ အရာရာကောင်းတယ်။ ငါ့အလုပ်မှာလည်းပျော်တယ်။ အလုပ်တွေအများကြီးပဲ။ ဒါပေမယ့် နောက် ၃ နှစ်ဆို ငါချမ်းသာတော့မှာ။
မင်းက အချိန်တိုင်းအလုပ်လုပ်နေတာကိုး။ မင်းဘယ်လိုကိုင်တွယ်လဲတော့ ငါမသိဘူး။။ အားလပ်ချိန်နည်းနည်းယူသင့်တယ်။ ငါနဲ့လာပြီး ဘောလုံးကန်ပါလား။
အရမ်းအလုပ်များနေတယ် သူငယ်ချင်းရယ်။ Venture Capital။ အဲ့ဒါက အခုအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ ကောင်းနေတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အခွင့်အရေးတွေ အကုန်ပွင့်နေပြီ။ ပြီးတော့ ငါကလည်း ဒီမှာ ရနိုင်သမျှ အကုန်လုပ်ဖို့ပဲ။ မင်းလည်း အလုပ်ပြောင်းဖို့စဉ်းစားသင့်ပြီ Harry။ လှုပ်ရှားမှုလေးနည်းနည်းတော့ လုပ်သင့်ပြီ။
မင်းမှန်ပါတယ်။ ငါလည်း အမြဲတမ်းအလုပ်ပြောင်းဖို့ စဉ်းစားနေတာ.. ဒါပေမယ့် ငါကလည်း ကွန်ပြူတာတွေအကြောင်းပဲသိတာ တစ်ခြားဘာမှမသိဘူး။
ဒီမှာလည်း ကွန်ပြူတာ ကျွမ်းကျင်သူတွေအများကြီးရှိနေတာပဲ။ မင်းတစ်ခုခုကို အထူးပြုဖို့လိုတယ်။
မင်းမှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ငါ့အလုပ်ကိုငါ တစ်ကယ်ကြိုက်တာကွ။
အင်း။ ဒီထက်ပိုလခကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးရှာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါသိပ်ပျော်မှာမဟုတ်ဘူး...
အင်း...အဲ့ဒါ အလုပ် ကမ်းလှမ်း တာလား?
ဟုတ်တယ်... ငါအတည်ပြောနေတာ။ နားထောင်။ ငါမနက်ဖြန် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်က လူတွေနဲ့ စကားနည်းနည်း ပြောမယ်။ အခုအချိန်မှာ IT အဖွဲ့မှာ လစ်လပ်တဲ့နေရာ တစ်ချို့ ရှိနေတာ ငါသိတယ်။ မင်း လွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်မှာပါ။ အခုတော့ သွားလိုက်ဦးမယ်။ နောက်မှ တွေ့ကြတာပေါ့။
ကောင်းပြီ။ နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့ သူငယ်ချင်း
ဟုတ်တယ်။ Johnny က ခုလေးပဲ အလုပ်ကို ထွက်သွားတယ်။
ခါတိုင်းလိုပဲပေါ့။ သူက ဘယ်တော့မှမရပ်ဘူးလေ။
ပြောနေရင်းနဲ့မှ။ နင်ဘာလာလုပ်တာလဲ? ဆိုင်မှာရှိနေသင့်တာ မဟုတ်ဘူးလား?
အားလပ်ချိန် နည်းနည်းယူနေတာလေ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အဲ့ဒီဆိုင်မှာ တစ်နေကုန် မတ်တပ်ရပ်ပြီးတော့ ဖိနပ်တွေ ရောင်းရတာကို စိတ်ကုန်လာပြီ။
ဒါပေမဲ့ ဖိနပ်တွေကတော့ အကောင်းစားတွေပဲနော်။
Olivia: All handmade, of course. But, like I say, I don’t want to spend the rest of my life running that shop.
အကုန်လက်မှုပစ္စည်းတွေပဲလေ။ ဒါပေမယ့် ငါပြောခဲ့သလိုပဲ။ ငါ့ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးကို ဖိနပ်ဆိုင် လုပ်ရင်းနဲ့ပဲ မကုန်ဆုံးချင်ဘူး။
ဟုတ်ပါတယ်။ ငါလည်းအဲ့ဒါကို အရင်ကတည်းက တွေးထားပါတယ်...
မင်းအတွက် ၀က်(ဘ)ဆိုဒ် လုပ်ပေးမယ့်သူ ရပြီလား။
ဟင့်အင်း။ ဒါပေမယ့် ငါစဉ်းစားထား... ငါသိချင်တာက... ငါထင်မထားမိဘူး...
ငါ? နင့်အတွက် ၀က်(ဘ)ဆိုဒ် လုပ်ပေးဖို့လား?
အင်း၊ ဟုတ်တယ်... ငါသိတဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ကိုပဲ လုပ်စေချင်တာ... ငါယုံကြည်နိုင်မယ့်သူပေါ့...
အင်း၊ ငါလုပ်နိုင်လောက်ပါတယ်။ သေချာပါတယ်။ ငါစဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်။
ဟိုင်း Fadi! နေကောင်းလား? ငါ့သူငယ်ချင်း Harry ကို သိလား?
ဟင့်အင်း... တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။
Fadi က စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း လုပ်တယ်လေ။ မဟုတ်ဘူးလား Fadi?
အင်း၊ ဟုတ်တော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတိအကျကြီး မဟုတ်ဘူး... ငါတို့က စားသောက်ဆိုင် တော်တော်များများကို အစားအသောက်တွေ ထောက်ပံ့ပေးတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ပြောပြမယ်... အခုအချိန်မှာတော့ ပြသနာတွေနဲ့ အိမ်မက်ဆိုးကြီးပါပဲ။
အလို ဘုရားရေ။ ဘာပြဿနာများပါလိမ့်?
အင်း၊ အခုတစ်လော အလုပ်တွေအရမ်းများတယ်... မလိုက်နိုင်တော့ဘူး။ အဲ့ဒါ ငါ့အဖေလုပ်ငန်းလေ၊ ဒါပေမယ့် သူက အခုအသက်ရလာပြီ။ ငါ့ဦးလေးလည်း ငါတို့နဲ့ တူတူ အလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူက စိတ်မ၀င်စားဘူး။ အဲ့တော့ ငါ့အပေါ် တာဝန်တွေ အကုန် ကျလာတာပဲ။ ဘာတွေ ၀င်လာပြီး ဘာတွေထွက်သွားတယ်ဆိုတာ မမှတ်နိုင်တော့ဘူး။
ကြားရတာတော့ ခင်ဗျားမှာ ကုန်ပစ္စည်း ခန့်ခွဲမှု စနစ်ကောင်းကောင်း လိုနေသလိုပဲ။
ဟုတ်တယ်။ အဲ့ဒါ ငါတွေးနေတဲ့ အတိုင်း အတိအကျပဲ - ခင်ဗျား ဘယ်လိုလုပ် သိလဲ?
အဲ့ဒါက ကျွန်တော့အလုပ်လေ။ ကျွန်တော်က ကွန်ပျူတာ အခြေပြု ကုန်ပစ္စည်း ခန့်ခွဲမှု စနစ်တွေ ရေးဆွဲတယ်လေ။ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်တာ အကုန်လုံးအတွက် IT နဲ့ အဖြေရှာပေးတယ်လေ။
အားပါး! အရမ်းကောင်းတာပဲ။ နားထောင်... အခုအတည်ပြောနေတာနော်... အလုပ်ကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားလား
Harry: Erm... well... yeah!.... That’s three job offers in the last five minutes! What should I do?
အင်း...အဲ...ဟုတ်ကဲ့!... ခုငါးမိနစ်အတွင်းမှာ အလုပ်ကမ်းလှမ်းတာ ၃ ခုရှိပြီ! ငါဘာလုပ်သင့်လဲ?
Permalink Reply by kyawkyawwin on August 10, 2015 at 15:43